Warqad codsi ah oo ay saxiixeen dad ka badan hal milyan qof oo baarlamaanka Britain ka… – Hagaag.com
Warqad codsi ah oo ay saxiixeen dad ka badan hal milyan qof oo baarlamaanka Britain ka…
Posted on 29 Agoosto 2019 by Admin in World // 0 Comments
Kumanaan dad ah ayaa isugu soo baxay waddooyinka qeybo badan oo ka tirsan dalka Britain si ay uga mudaaharaadaan go’aanka Raiisul Wasaaraha Boris Johnson ee ah in shaqada laga joojiyo baarlamaanka usbuucyo ka hor ka bixitaanka Midowga Yurub. Halka hal milyan in ka badan oo dad ah saxiixeen codsi baarlamaanka looga dalbanayo inay qaraarkaasi diidaan.
Warbaahinta Ingiriiska ayaa ku waramaysa in banaanbaxyo ay ka dhaceen magaalooyinka London, Edinburgh, Cardiff, Manchester, Bristol, Cambridge iyo Durham.
In kabadan hal milyan oo qof ayaa saxiixay codsi ay kaga codsanayaan baarlamaanka Ingiriiska in uusan shaqadiisa joojin bartamaha September ilaa bartamaha October, sida Johnson uu codsaday.
Warqadan Codsiga ah, oo dadka saxiixay kor u dhaaftay hal milyan ka hor saqdii dhexe ee xalay, ayaa soo baxday kadib codsigii Johnson ee ahaa in la hakiyo baarlamaanka ka hor qorshaha uu dalkiisu ugaga baxayay Midowga Yurub.
Hogaamiyaasha mucaaradka ayaa sheegaya in codsigan Johnson uu yahay isku day ula kac ah oo lagu horjoogsanayo dadaalada sharci dajiyaasha ee looga hor istaagayo in dalka uu ka baxo Midowga Yurub heshiis la’aan.
Wasiirkii hore ee maaliyadda Philip Hammond, oo is casilay markii Johnson uu noqday hogaamiyaha xisbiga Conservative-ka, ayaa ku tilmaamay tallaabada “mid aan sal iyo raad laheyn.”
Warbaahinta Ingiriiska ayaa ku waramaysa in Hogaamiyaha Xisbiga Conservative-ka ee Scotland Ruth Davidson ay ku dhawaaqi doonto iscasilaadeeda Khamiista iyadoo ka soo horjeeda talaabada uu qaaday Johnson.
Go’aanka Johnson ayaa sidoo kale ka dhex abuuray baarlamaanka xanaaq iyo filan waa, gaar ahaan kuwa ka soo horjeeda ka bixitaanka Britain ee Midowga Yurub ee (Brexit).